Arduino mapurojekiti - Ikkaro
kudzidziswa >> Arduino
Arduino ipuratifomu ya Mahara Hardware, iwo mureza weOpen Hardware. Ini ndoda kufunga nezve iyo arduino bhodhi sezvakaita muuropi iyo inodzora edu ese mapurojekiti. Iyo chaiyo microcontroller iyo inotibvumidza kuti tibatanidze nemhando dzakasiyana-siyana dzemasaenzi ekuziva pasi uye nekugadzira zvigadzirwa zvedu nemidziyo.
Kusvika ikozvino, kana isu tichida chimwe chinhu chakafanana taifanira kutora PIC, kadhi rechirongwa uye kuunganidza dunhu redu. Arduino, ngatitii yakamisikidza uye nekutenda kunharaunda huru iriko kutenderera nemagwaro emunhu wese nezviuru, makumi nemakumi ezviuru zvemapurojekiti akaitwa uye anowanikwa kuvaka, kunatsiridza nekudzidza, yakadzinga mapurogiramu ekare, kunyanya pakati mudzidzi mutsva. Arduino akabvumidza iko kupinda mumapoka ema fan evamagetsi emagetsi.
Tichataura nezve mamwe mapurojekiti atiri kuzoshandisa Arduino pakuedza kwedu kwekumba uye kwedu Zvirongwa zve DIY
Solution: avrdude: ser_open (): haigone kuvhura chishandiso paArduino
Muchikamu chino ini ndiri kuzotsanangura nzira yekugadzirisa yakajairika kukanganisa muArduino: avrdude: ser_open (): haigone kuvhura chishandiso «/ dev / ttyACM0»: Mvumo… Ramba uchiverenga
Starter Kit kuArduino Super Starter Kit UNO R3 Project naElegoo
Mazuva mashoma akapfuura Ndakatenga Arduino Starter Kit, kubva kune iyo brand Elegoo, kupihwa kwe € 30. Ndine ma sensors akati wandei uye zvinhu zvandanga ndichitenga, asi ini ndanga ndichishaya mazhinji eaya anopiwa muKit uye zvinoita kunge zano rakanaka kuritenga uye kuona kana mhando yechigadzirwa ichi chakakodzera. Ivo vane mana ekutanga kits, yekutanga ndiyo Super Starter inova kiti yandakatenga uyezve mamwe maviri ane zvimwe zvinowanda, asi chokwadi ndechekuti ndakatora iyi nekuda kwekupa. Ndanga ndichida kutora iyo ine radio frequency.
Kuverenga kumwe kuongorora kweye Elegoo mabhodhi ivo vanotaura zvakanaka, asi kune vanhu vanogunun'una nezve kuenderana kwebhodhi iri dombo reArduino UNO R3. Zvakaitika kwandiri zvave zvakanaka, ndiro yakashanda zvakakwana, inoenderana neArduino IDE pasina kuita chero chinhu, ingo plug uye utambe. Ndatakura iyo blink, Ndambochinja. Ndakaedza zvimwe zvinhu nekukurumidza uye zvese zvinoshanda mushe (Kwayedzwa neUbuntu 16.10 uye kubuntu 17.04)
Arduino multitasking uye nguva manejimendi
Ini handisi Arduino nyanzvi, kunyangwe ndiine ndiro kwenguva yakareba ini handina kumboongorora. Nguva dzandakaishandisa chave senge chishandiso chekuteedzera nekunamatira kodhi yatogadzirwa asi isina kufarira kukuru kudzidza chaizvo mashandiro ayo asi kungori nechinangwa chekuita kuti ishande uye ive inobatsira kwandiri. Ino Kisimusi ndakarongedza chiitiko chekuzvarwa zvishoma nemamwe maLED uye HC-SR04 ultrasound sensor. Uye ndakamira kuti ndione zvaifanira kuitwa.
Ini ndaingoda kuita zvinhu zvakasiyana nema LED maviri kubva kuchiratidzo chimwe chete. Whoops. Ndakakurumidza kugumburwa pane zvandinofunga kuti zvichave chimwe chekukanganisa kwekutanga kwaunosangana nako paunotanga kukanganisa pamwe neArduino. Uye iwe haufanire kuzviita zvakanyanya kuomarara. Ndiri kungotaura nezve mamwe maLED, unoona kuti haugone kuita zvaunoda nemazvo.
Ngatizvibudise pachena kubva pakutanga multitasking haipo muArduino, mabasa maviri haagoni kugadziriswa zvakafanana. Asi kune hunyanzvi hwekufona nekukurumidza zvekuti zvinoita sekunge vanoshanda pamwechete.
Ini ndinotaurira nyaya yacho zvakadzama. PaKisimusi ndakamisikidza Chiitiko chekuzvarwa uye ndaida mwenje wekuzvarwa kuti uuye kana vanasikana vangu vauya. Hapana chakaoma. Ini ndaingoda matavi maviri emwenje akatungamirwa kuti ashande zvakasiyana kune hunhu hweiyo proximity sensor.
Maitiro ekugadzira robhodhi yakagadzirirwa neArduino
Muchikamu chino tiri kuzodzidza maitiro ekuita a diki redzimba rakagadzirwa neArduino bhodhi. Chinangwa che robhoti ndechekudzivirira zvipingamupinyi nenzira yeiyo ultrasound sensor, painosvika pachipingamupinyi ichatarisa kune ese mativi uye kuona sarudzo yakanakisa yekuenderera mberi nekufamba kwayo.
Muchikamu chekutanga ichi ticha tarisa pakuvaka iyo robhoti chikuva, kuunganidza zvikamu uye kubatanidza.
Kudzora kweServomotors nePWM uye Arduino
Isu tatoisa pane blog Arduino (https://www.ikkaro.com/kit-inicio-arduino-super-starter-elegoo/) uye muchokwadi unoonekwa mumapurojekiti akati wandei anosanganisira uyu (https://www.ikkaro.com/node/529)
Zvino ngatiendei kumberi uye ngatiitei modulate masaini nekupisa upamhi (PWM), izvi zvinogona kushandiswa semuenzaniso kubata servo motors senge iwo anoratidzwa pano (https://www.ikkaro.com/introduccion-al-aeromodelismo-electrico/) kana rgb yakatungamira pakati pevamwe. Kune avo vasingazive kuti chii chinonzi PWM, iko kuchinjika kunoitwa kuchiratidzo uye kunoshanda ku "kuendesa ruzivo kuburikidza nekodhi yekutaurirana kana kudzora huwandu hwesimba rinotumirwa kune mutoro" (Wikipedia)
Chii chinonzi Arduino
Ndanga ndichitarisa kumapurojekiti akagadzirwa ne Arduino, saka ndaida kuziva kuti izvi ndezvei Arduino uye ndatsvaga rumwe ruzivo pamambure.
Arduino ndeye yakavhurwa sosi Hardware chikuva inoenderana neyakareruka I / O bhodhi uye nharaunda yekusimudzira iyo inoshandisa iyo Kugadziriswa / Wiring programming mutauro. Arduino inogona kushandiswa kugadzira zvionera zvekudyidzana zvinhu kana inogona kuve yakabatana necomputer software